Ciidanka Kumaandoska Soomaaliya oo dilay 16 dagaalyahan oo Al-Shabaab ah | Dalka Times - News and Politics
Home LOCAL Ciidanka Kumaandoska Soomaaliya oo dilay 16 dagaalyahan oo Al-Shabaab ah
Ciidanka Kumaandoska Soomaaliya oo dilay 16 dagaalyahan oo Al-Shabaab ah
Ugu yaraan 16 ka tirsan dagaalyahannada Al-Shabaab ayaa lagu dilay Soomaaliya kadib markii ciidamada gaarka ah ee Soomaaliya oo ay taageerayaan kuwa tababaraan Turkiga ay weerareen fariisimaha Al-Shabaab ee gobolka Sh/Hoose, warbaahinta dawladda ayaa sheegtay Axaddii.
Weerarka ayaa lagu qaaday fariisimo Al-Shabaab ay ku leeyihiin meel u dhow magaalada Awdheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose, sida uu sheegay raadiyaha dowladdu leedahay. Abaanduulaha Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed (SNA) ayaa xaqiijiyay howlgalka iyo khasaaraha ka dhashay bayaan lagu soo daabacay barta Twitterka.
“Guutadii 66-aad ayaa maanta waxay weerar gaadmo ah ku dileen 16 dagaalyahanno oo ku sugnaa Awdhegle”, ayay SNA ku tiri war saxaafadeedkeeda.
Ugu yaraan afar ka tirsan Al-Shabaab ayaa dilay millatariga Soomaaliya Arbacadii la soo dhaafay kadib markii dagaalyahano ka tirsan kooxda ay weerareen xarun millatari oo ku taal magaalada Awdheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Ciidamada gaarka ah ee Soomaaliya oo ay taageerayaan ciidamada Midowga Afrika (AMISOM) ee ku sugan Soomaaliya ayaa dib ula wareegay Talaadadii magaalada istiraatiijiga ah ee Awdheegle oo qiyaastii 70 kiiloomitir (43 mayl) u jirta koonfurta Soomaaliya ee Muqdisho.